परीक्षार्थीको नम्बर थपघट गर्ने अपराध त्रिविमा कसले गर्छ ? पार्टीको कोटामा नियुक्त भएकाले - Jerung Films
परीक्षार्थीको नम्बर थपघट गर्ने अपराध त्रिविमा कसले गर्छ ? पार्टीको कोटामा नियुक्त भएकाले
wwwjerungfilmswwwjerungfilms6Jul 2019
काठमाण्डौ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षामा आफ्ना नातेदार र पार्टीनिकट परीक्षार्थीलाई पास गराउन जाँच सकिएपछि उनीहरूलाई नम्बर थपिदिनेदेखि अरूको नम्बर घटाइदिनेसम्मको आपराधिक काम भयो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले यो आपराधिक कामको पर्दाफास भएको छ। यो हदसम्मको बदमासी गर्ने मानिस को हुन्? उनीहरूले त्रिविमा कसरी नियुक्ति पाए?
त्रिविमा हुने यस्ता बदमासीमा तिनै मानिस धेरै मुछिएका छन्, जो राजनीतिको फेरो समातेर त्यहाँ पुगेका छन्। आयोगका अध्यक्ष शर्मा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट मानिन्छन्। त्यही निकटताका आधारमानै उनी विभिन्न पदमा नियुक्त हुँदै आएका छन्।
तत्कालीन नेकपा एमालेसँग शर्माको राम्रो सम्बन्ध थियो। उनी २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा नवलपरासीबाट उमेद्वारसमेत बनेका थिए। उनले ११ वर्षसम्म काठमाडौंको मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजमा क्याम्पस प्रमुख भएर काम गरे।
शर्मा २०७३ साउन ६ गते आयोगको अध्यक्ष मनोनित भएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका शर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए।
शर्मा अध्यक्ष भएको एक साता नबित्दै उनकी श्रीमती सीता शर्मा पुस्तकालयको अस्थायी जागिरेबाट प्राध्यापक स्तरको पदमा बढुवा भएकी थिइन्। आयोगका सदस्य चिन्तामणि पोखरेल नेपाली कांग्रेस निकट हुन्। आयोगका प्रशासन प्रमुख रहेका परशुराम कोइराला कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
आफ्ना मानिसको अंक थप्नेमात्र होइन, उनीहरूका प्रतिस्पर्धीको नम्बर घटाइ दिने, कतिलाई फेल बनाउनेसम्मको अपराध उनीहरूले गरेका छन्। उदाहरणका लागि, कोर्ड नम्बर ९६९ भएका परीक्षार्थीको प्रथम पत्रमा १० अंक घटाइदिएर फेल गराएको आरोप छ।
लेखा अधिकृतका लागि लिइएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि चलखेल भएको छ। परीक्षार्थी पास गराउन परीक्षक राजेश्वर न्यौपाने र संपरीक्षक टेकनाथ ढकालले २ देखि १० अंक थप गरिदिएका छन्। ५८४ कोर्ड भएका परीक्षार्थीलाई १० नम्बर थपेको उत्तरपुस्तिकामा देखिन्छ। ६८३ कोर्ड नम्बर भएका परीक्षार्थीलाई पनि ९ अंक थपेको आरोप छ।
त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनिया स्वयं यसका अर्को उदाहरण हुन्। उनी कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्रिविमा नियुक्त भएका थिए। अर्काको सोधपत्र चोरेको आरोपमा विवादित खनियालाई कांग्रेसले विरोधका बावजुद् उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो।
खनिया, त्रिपाठी र उप्रेती प्रमुख तीन दलको भागबन्डामा नियुक्त भएका थिए। कांग्रेसले उपकुलपति, एमालेले रजिष्ट्रार र माओवादीले रेक्टर पद भागबन्डा गरी लिएका थिए।